SOTUS The Series - (2016) မြန်မာစာတန်းထိုး
SOTUS The Series - (2016)
Normal ကား​တွေပဲကြည့်​ရတာ ညည်းညူး​နေတဲ့ ပရိသတ်​ကြီးအတွက်​ bl series ​လေး တင်​​ပေးပါရ​စေ ဒီကား​လေးဟာဆိုရင်​ 2016 ခုနှစ်​ကတည်းက ထွက်​ရှိခဲ့ပြီး အစက​တော့ ထပ်​ရိုက်​ဖို့ စိတ်​ကူးမရှိ​ပေမယ့်​ အခု​တော့ bl ချစ်​ပရိသတ်​​တွေရဲ့ ​တောင်းဆိုချက်​​ကြောင့်​ ​နောက်​ထပ်​ season2ကို ဆက်​လက်​ပြီး ရိုက်​ကူးမယ်​လို​တော့ကြားထားပါတယ်​
ဇာတ်​ကား review ​လေးက​တော့ SOTUS ဆိုတဲ့ အင်​ဂျင်​နီယာ ​ကျောင်းမှာ ဖြစ်​ပျက်​ခဲ့တဲ့ စီနီယာ ဂျူနီယာ အချစ်​အ​ကြောင်းပဲဖြစ်​ပါတယ်​ စီနီယာ​တွေက SOTUS ဆိုတဲ့ သူတို့​ကျောင်းရဲ့ အဓိပ္ပါယ်​ ကို ဂျူနီယာ ​တွေသိ​အောင်​ ဘယ်​လိုလုပ်​ပြမယ်​ ပြီး​တော့ စီနီယာ​တွေနဲ့ ဂျူနီယာ​တွေကြားက ပဋိပက္ခ ​တွေ ဘယ်​လို​ကျေဖျက်​ပြီး​တော့ ဘယ်​လို အချစ်​​တွေ ​ပေါ်​ပေါက်​လာမယ်​ဆိုတာ ကြည့်​ရှု ခံစား​ပေးကြပါဦးလို့
ဒီကားလေးက အပိုင်း ၁၅ ပိုင်းပါဝင်ပြီး တစ်ပိုင်းမှာ Part4ခုပါပါတယ်
တစ်ပတ်ကို သုံးပိုင်းနှုန်းနဲ့ တင်ပေးသွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်
Episode 15 ( Openload Link ) - Final
Special Episode ( Openload Link )
Drama LGBT School Thailand
Labels: Drama LGBT School Thailand
Smib Smib June 29, 2017 at 10:29 PM
Episode 1 Part 1 link မပေါ်ပါ။ dim ဖြစ်နေပါတယ်။
zwemen tun July 20, 2017 at 12:49 PM
Lay Cho July 25, 2017 at 8:44 AM
ဒီလင့်ခ်က သေနေပါတယ်ခင်ဗျာ .
ရနိုင်မယ်ဆိုရင် . အဲ့ဒီ့အပိုင်းလေးလိုချင်ပါတယ် ..
အဆင်ပြေအောင် ပြန်တင်ပေးစေချင်ပါတယ်ခင်ဗျ ..
Lay Cho July 25, 2017 at 9:08 AM
Link ပြန်ချိတ်ဖို့အခက်အခဲရှိလျှင်လည်း ..
အဲ့ဒီ့အပိုးင်လေးရဲ့ စာဖိုင်လေး ပေးပါလားခင်ဗျာ ..
Myanmar Asian TV Channel July 26, 2017 at 5:30 PM